Oghere Sentinel | ThatsLuck.com
Oghere Sentinel ọ bụ mgbakwunye maka kediegwu ►Pụrụ Ime bbylọ, nke mbụ online roulette software nke na-enye gị ohere nyochaa na ozugbo gburugburu Tebụl 20 roulette.
Iji mee ka ọtụtụ ihe omume a bụrụ ihe dị mkpa iji zụta akwụkwọ ntuziakaPụrụ Ime bbylọ, Otú ọ dị, ọ bụrụ na i nweela ederede ederede na ederede ntụgharị nke ụfọdụ tebụl roulette, ị nwere ike iji mmemme ahụ n'enweghị nsogbu karịa, ọ dịkwa n'ihi na Oghere Sentinel enwere ụfọdụ ọrụ na-atọ ụtọ anaghị emetụta naanị data anakọtara site na Lobby Miner.
Olee Lobby Sentinel na-arụ ọrụ
Oghere Sentinel na omume ọ nko nko faịlụ ederede e dere na ozugbo site ►Pụrụ Ime bbylọ ma kọwapụta usoro ọnụọgụ metụtara usoro dị mfe nke roulette, yabụ ka anyị kwuo maka ohere ndị kpochapụla:
IghHigh / Ala
Ihe mbụ ị ga - eme bụ pịa bọtịnụ ahụ Bugharịa tebụl Roulette, n'ụzọ dị otú a, a ga-eburu ha n'ime Oghere Sentinel faịlụ niile nke tebụl ahọrọ dị iche iche ma n'eziokwu ị ga-ahụ na ọnụọgụ nke spins edere ga-apụta (Oghere Spins), mgbe kọlụm mbụ (Roulette #) ga - eme ka a mata tebụl na mkpụrụedemede na - aga n’ihu A,B,C, wdg.
N'oge a ọ dị mkpa ịkwụsịtụ iji kọwaa ụdị ọnụọgụ a na-enyocha Oghere Sentinel.
Ọ bụrụ na ọ bụghị oge mbụ ị na-eleta ThatsLuck.com o nwere ike ịbụ na ị gụọworị ihe gbasara oke ọnụ ọgụgụ t-Mmụta na post raara nye Roulette tracker ►Algọridim t-Luck.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgụ ihe n'isiokwu m na-atụ aro ka ị gụọ (ma ọ bụ gụgharịa) post ahụ, n'oge ahụ, na nkenke, anyị nwere ike ịsị na t-Student abụghị ihe ọ bụla karịa uru nke na-egosi obosara nke ọdịiche ahụ n'etiti uzo abuo abuo.
Ogologo ya pere oke oke, ka anyị kwuo na ọ na-esi na 0 (nhazi zuru oke tụlekwara efu) ruo 4 (ọnụọgụ ọnụọgụ enweghị atụ).
T-Mmụta nwekwara ike iku ụkpụrụ na-adịghị mma, n'echiche na mgbe uru bara uru ọ pụtara na enwere otu hyperfrequency ohere, ọ bụrụ na uru ahụ adịghị mma ọ pụtara na enwere otu hypofrequency (ya mere na omume a ga-enwe hyperfrequency nke na-abụghị ohere).
Ya mere, anyi nwere uzo di iche n'etiti -4 e 4, ebe uru 0 na-anọchi anya nguzozi zuru oke.
Naanị iji doo anya, na 37 na-atụgharị uru efu ka a na-enweta ma ọ bụrụ na Red apụta ugboro 18, Black 18 ugboro na 0.
Ebe anyị guzobere ọnụ ọgụgụ ntụaka, anyị nwere ike iji maa atụ chọpụta na ọ bụrụ na uru nke t-Mmụta ahụ erughị 2,5 anyị nọ n'ọnọdụ ọdịiche nkịtị, gafee 2,5 ọdịiche pụtara ìhè na-amalite, ebe gafere uru 3 (na-atụle na ọnụ ọgụgụ kachasị dị ka 4), ohere hyperfrequency kwesịrị ịmalite ịhapụ ohere maka ohere ezughị oke (ịlaghachi na nhazi).
Akwụsịrị m ebe a, n'oge ahụ ọ dị mkpa ịkọwa otu esi agụ ọnụọgụ ndị anyị ga-ekwu maka obere oge, mgbe ahụ onye ọ bụla ga-enwere onwe ya ịtọ usoro nke aka ha maka mbenata nke oghere (ịlaghachi nha nha) kama ịga n'ihu nke ọdịiche ahụ (soro usoro nke ohere hyperfrequency).
Otu esi enweta data
Ka anyị laghachi na foto gara aga, dịka ị pụrụ ịhụ na onye ahọpụtara t-Student Alert iche M setịpụrụ uru 2,5 nke na-adabere na ihe edere n'elu na-anọchite anya uru nke na-egosi ọnụnọ nke ọdịiche pụtara ìhè.
Na ihe nhọrọ ozugbo gaa n'aka nri Ikpeazụ atụ ogho # kama anyi ga aga igosi a Oghere Sentinel iji nyochaa naanị ikpeazụ 300 spins.
Ga-achọpụtaworị site na ikiri kọlụm Spins, na na ihe oyiyi na tebụl dị iche iche na-erughị 100 spins edere, nke a pụtara na n'ọnọdụ a Oghere Sentinel agbanyeghị ọ ga-enyocha ọnụ ọgụgụ edenyere aha niile, ọ bụrụ na atụ, anyị nwere ihe karịrị puku ntụgharị kwa tebụl, naanị narị atọ gara aga ka a ga-enyocha.
N'oge a, mgbe ị kpebiri uru Alert (2,5) na ruo ole mpịakọta kwa tebụl iji nyochaa (nke ikpeazụ 300), anyị nwere ike ikpebi ma nyochaa tebụl niile n'usoro ịpị bọtịnụ Nyochaa Tebụl niile - na nke a, anyị ga-echere ka ngwanrọ ahụ mechaa nyocha nke tebụl niile - ma ọ bụ na anyị nwere ike nyochaa tebụl ahụ n'otu n'otu, site na ịpị bọtịnụ nwere okirikiri uhie na kọlụm Tulee.
Esi kọwaa data
Ozugbo enyochachara ọnụọgụ niile na tebụl niile, ogwe njikwa anyị ga-enwu gbaa na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-egosi tebụl na ohere ọ ga-eji nwee oghere dị mma ma ọ bụ na-adịghị mma nke 2,5.
Buru n'uche na nyocha maka uru 2,5 (ma ọ bụ ihe ọ bụla ị họọrọ) ga-amalite azụ azụ site na ntụgharị ikpeazụ edere na tebụl, ọ bụrụ na achọtara uru 2,5 tupu ntụgharị 300, nyocha ahụ kwụsịrị na ihe dị mkpa Kọlụm Tranche chọta kpọmkwem ole ole ka ndị ikpeazụ spins na-emepụta ihe ọdịiche achọrọ. Nwere ike tinye ụkpụrụ ọbụna karịa 300, o doro anya na oge nyocha ga-agbatị.
Ihe Nlereanya: na onyonyo dị n’elu na Isiokwu B uru 2,5 ka emepụtara maka ohere Red, uru 2,5 dị mma, yabụ n’ezie ọ bụ Red na-apụta ugboro ugboro, agbanyeghị ọ bụrụ n’anyị lere anya Kọlụm Tranche, anyị ghọtara na e mepụtara uru a na naanị 6 ntụgharị, ya mere ọ pụtara na a ga-ewepụta nọmba 6 Red n'usoro, ọ dịghị ihe ọ bụla mgbe ahụ.
Otu ọnọdụ ahụ na-emekwa na Tebụl F e J, ya mere anyi kwesiri ichere maka oge di nma ma megharia nyocha.
Dị ka ị maara ►Pụrụ Ime bbylọ emebere iji weghara ọnụọgụ oge ebighi ebi, yabụ na ị gaghị eme ka Lobby Sentinel rụọ otu ụzọ ahụ?
Ọ bụrụ na ị pịa bọtịnụ ahụ Gbanyụọ Autominer ma setịpụ (nke mbụ) oge etiti, nkeji ole na ole Oghere Sentinel ga-ebugote data nke Lobby Miner dere ma megharịa nyocha nke tebụl niile na nke a ruo mgbe emesịrị a oti mkpu nke a na-arụ ọrụ site na ịpị nhọrọ ahụ Aleda Alert.
N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na kama nke a nụrụ ụda mkpu na ị chọrọ email iji gwa gị na gị ama, dị nnọọ nwee nhọrọ Alert Email.
Abụọ ikpeazụ ikpeazụ a mmemme na peeji nke na- Nọrọ nke na-ahapụ windo mmemme ahụ na mbido na Ogbi ogbi, nke na-emechi mkpu mkpuchi a na-emebu.
Ma olee mgbe ị na-egwu egwu?
Nke a bụ ọnọdụ dị ezigbo iche karịa na mbụ, lee anyị nwere Isiokwu G ya na onye Mmụta t-uru nke 2,62 ma ọ bụ naanị mgbe 10 spins, mgbe ihe Isiokwu F ọ bụ na 2,53 na ohere High n'ime oge 179 atụ ogho.
N'oge a, m na-akwụsị, n'echiche na ị ga-enyocha atụmatụ ahụ (na-ekelekwa ngwaọrụ ndị anyị ga-achọta mgbe e mesịrị), mana na-eche n'echiche dịka ọmụmaatụ ịchọrọ igwu egwu maka nloghachi na njigide nke ohere dị elu nke a table, pịa na bọtịnụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke kọlụm Lụọ! ka anyị hụ ihe na-eme.
Ọ na-eme na ị na-akpaghị aka ịgbanwee gaa na Autopilot panel, ebe akụkụ nke elu anyị na-ahụ a osisi bot na-akpaghị aka nzọ otú ọtụtụ spins anyị chọrọ na nke anyị ga-ekwu banyere mgbe e mesịrị, mgbe na ala akụkụ e nwere niile na-egosi maka anyị ịkụ nzọ.
Ihe mbu anyi huru bu aha Isiokwu F (Italian Roulette na nke a), mgbe ahụ anyị mepee ihe nchọgharị anyị wee banye na tebụl dị ka ọ dị na mbụ.
Ozugbo ihe anyị kwesịrị ime bụ tinye aka ọnụọgụ 5 ma ọ bụ 6 nke pụtaworị ugbu a na nke anyị nwere ike ịhụ na akụkọ ihe mere eme nke tebụl n'onwe ya.
N'okpuru aha okpokoro ma ọ bụrụ na ị chọpụta na enwere adịgide na nsonaazụ niile n'usoro oge, yabụ ọ ga-adị mfe nghọta site na ọnụọgụ nke ịchọrọ ịmalite maka ntinye.
kwa ịgbakwunye nọmba ọhụrụ dị pịa kapeeti na ọnụ ọgụgụ ahụ, maka wepụ ndenye ọ bụla na-ezighi ezi, pịa ugboro abụọ na ọnụ ọgụgụ ezighi ezi na kọlụm ọnụnọ.
Dị ka ị pụrụ ịhụ na onyonyo ahụ, mgbe ntinye nke nọmba 6 ahụ pụtara n'oge ahụ, anyị nwekwara data dị mkpa ọzọ: n'okpuru uru t-Mmụta nke ohere ọ bụla enwere n'ezie ọnụọgụ nkeji nke Ohere hypofrequency kwesịrị ka onye ọkpụkpọ merie (Na-erite uru) ma ọ bụrụ na ọdịiche ahụ laghachi na nhazi, ya na t-Student = 0.
N'ezie, n'okpuru ohere dị elu enwere atụmanya nke nkeji 18 iji merie site na ịkụ nzọ na obere ohere (ma ọ bụ 1-18 ma ọ bụrụ na ịchọrọ, ma ọ bụ Manque maka ndị ọrụ ibe France).
Yabụ ọ bụrụ na achọrọ m igwu egwu maka nlọghachi nke ihe mkpofu (yabụ na m ga-etinye aka na obere oge), enwere m ike ịtọ ihe mgbaru ọsọ (Stopwin) nke 9 ma ọ bụ 10 (ọkara nke mgbake a na-atụ anya ya).
M ezipụta na-atụ anya na mgbake (Na-erite uru) abụghị nọmba echepụtara, ma ọ bụ ọnụahịa uru nke npụta nke Obere ohere kwesịrị inwe na 185.
The nsogbu, Otú ọ dị, bụ na anyị amaghị ole Spins na mgbake nwere ike iri ebe, n'echiche na n'ezie Low ohere ga-agbake mwepu, ma ọ bụrụ na ọ na-eme ya n'ime 500/600 atụdo, na efu ga eri niile nwere ike (ghọtara ihe mere na ị hapụ roulette?).
Iji kpuchido onye ọkpụkpọ ahụ megide ọdachi a, enyela m nhọrọ ikpeazụ nke ogwe a (ma ọ bụ opekata mpe akụkụ dị ala metụtara nzọ), nke bụ Bet% họrọ.
Nke a na-enye anyị ohere ịhọrọ pasent nke hits ọ fọrọ nke nta ka a hụ (179 na ọnụ ọgụgụ) n'ụzọ dị ka iji wepu ihere nke ịhọrọ mgbe ịkwụsị.
Ka anyị kwuo na uru kachasị mma maka nzube a bụ igwu 15% nke ntụgharị ederede.
Yabụ ọ bụrụ na m họrọ 15 na nchịkọta nhọrọ Bet%, ọ na - eme ...
Ọ na-eme na n'ime bot anyị na-achọta ọnụ ọgụgụ gbaa a ga-egwu, nke bụ 27 (ma ọ bụ 15% nke 179), yabụ n'oge a, o zuru ezu iji aka gị mee nzọ mbụ na Ogologo ala wee pịa Gbanyụọ bọtịnụ, nke ga - eme ka bot rụọ ọrụ 27 oge.
Mgbe usoro 27 gachara, anyị nwere ike ịtọ bot ahụ iji gbanyụọ PC (shutdown) ma ọ bụ ka oti mkpu (Gwuo Ụda).
Ọ bụrụ, na aka nke ọzọ, maka ihe ndị ọzọ ịchọrọ ịhapụ bot ka nzọ maka 10, 100 ma ọ bụ 1.000 na-atụgharị, jiri aka tinye ntinye achọrọ n'ọhịa na-esote bọtịnụ OFF ma malite ihe niile.
Ọ na-ewe obere, na omume ị ga-abanye nhazi X / Y na ihuenyo na mpaghara dị iche iche Ihe abụọ naanị: nke mbụ bụ doro anya bọtịnụ iji megharịa nzọ ahụ, nke abụọ bụ isi nke ihuenyo anyị na-ahọrọ dị ka Ntanetị Trigger.
Iji tinye nhazi na koodu agba nke Ihe Na-akpalite, Naanị m ga-eme ka nhọrọ ahụ dị Ntughari Turbo (n'elu aka nri), debe m na nọmba 1 mgbe ọ pụtara (n'otu ebe koodu Koodu gosiri na Ogwe Ama Pixel è ClWhite dị ka ọnụ ọgụgụ) e pịa oghere otu oge na kiiboodu.
Nke ahụ bụ ihe niile, a ga-edekọ usoro ihe omume a na-akpaghị aka na mmemme ahụ! Maka bọtịnụ nkwụghachi / nkwenye nke nzọ naanị, m ga-etinye onwe m ma ọ bụ obere na etiti nke a ma gụọ nhazi na ihuenyo wee jiri aka tinye ha na igbe abụọ X Coord e Y Usoro aka ekpe.
Ka anyị weghachi: M na-enyocha nhọrọ Turbo Config, tinye òké ahụ na nọmba 1 nke ngụda, gbaa mbọ hụ na koodu agba dị ọcha (clwhite) wee pịa oghere. Mgbe ahụ, m na-etinye òké ahụ na bọtịnụ m ga-pịa iji kwado nzọ ahụ (cheta na a na-eji aka ya mee nzọ mbụ, yabụ maka ndị na-esonụ ọ ga-ezu iji pịa naanị bọtịnụ maka ikwughachi ya) ma gụọ nhazi na pikselụ Ama Pixel, ana m eji aka tinye ha na igbe 2 X coord na Y coord. Ọ bụ ya.
N'ikpeazụ, m ga-akọwa ọrụ nke igbe abụọ ahụ Bet Ngụọge e Bet igbu oge: nke mbụ bụ counter na-arụ ọrụ ozugbo enwere Trigger Point na vidiyo (yabụ ị ga-achọpụta ọbụlagodi na akpado Trigger ahụ n'ụzọ ziri ezi), nke abụọ bụ ọnụ ọgụgụ nke sekọndrị echere tupu ebumnuche ebe Trigger Point pụtara .
Ọ bụrụ na itinye 2 na mpaghara ahụ ọ pụtara na nzọ ahụ ga-eme 2 sekọnd mgbe ịkpalite Point pụtara na ihuenyo.
Maka obi abụọ ọ bụla lee vidiyo na ►YouTube.
Lọ nyocha Statistical
Ugbu a, ka anyị gaa na ngalaba ikpeazụ mana opekata mpe na Lobby Sentinel, ya bụ t-ụlọ nyocha ụmụ akwụkwọ.
Ekele maka simulator a, ị ga-enwe ike ịme nyocha na-enweghị ngwụcha iji ghọta etu ọdịiche dị na ohere si akpa agwa ma ị ga - enwekwa ike inweta ihe ezigbo parameters ịtọlite ​​usoro egwuregwu gị.
Ihe mgbako mbụ dị na elu (t-Student mgbako) bụ ihe dị mfe t-Student uru mgbako, dị nnọọ tinye ọnụ ọgụgụ nke spins egwuri (n'ezie ma ọ bụ chere), ọnụ ọgụgụ nke ndapụta nke a dị mfe ohere na pịa bọtịnụ TS Calc, kwekọrọ ọnụahịa tS ga-egosipụta ozugbo n'akụkụ ya.
Ozugbo n'okpuru nke a, anyị ga-ahụ t-Mmụta Simulator, nke ga-enyere anyị aka nyochaa ụkpụrụ ọnụọgụ na-adọrọ mmasị.
N'ezie, na simulator enwere m ike itinye, na mgbakwunye na ọnụ ọgụgụ ntụgharị nke a ga-enyocha, ụkpụrụ abụọ nke t-Student (ndị họrọ A e B) na m chọrọ inyocha.
Mgbe ahụ ịpị igodo Mehe Aga m enwe otu otu ịme anwansị na iji eserese eserese nke t-Student naanị maka ohere (dịka Red) na eserese (nke dị ala) na-enwe tebụl ego na-ezo aka na-ezo aka na ndị egwuregwu abụọ na-eche echiche nke na-abanyekarị Red ma ọ bụ mgbe niile Black (ihe efu efu doro anya na ngụkọta oge).
Pị igodo igodo ọtụtụ oge ga-enwe usoro ịmegharị dị iche iche.
Mana gịnị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ nsonaazụ nke 50.000 tranches nke 50 na-agba ọ bụla? Maka nke a, pịa Mpempe Rng na mgbe sekọnd ole na ole (ma ọ bụ nkeji ma ọ bụrụ na ị banyela ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ịme anwansị ma ọ bụ gbasaa ogologo nke otu tranche ahụ, dịka ọmụmaatụ site na 50 ruo 200 ma ọ bụ karịa ntụgharị), ị ga-enwe ike ịlele data ndị a na-adọrọ mmasị, ya bụ:
► Ugboro ole ka ọnụọgụ uru nke t-Mmụta agafewo uru A na anyị gosiri na igbe dị;
► Ugboro ole ka ọnụọgụ uru nke t-Mmụta agafewo uru B na anyị gosiri na igbe dị;
► ugboro ole na pasent nke uru nke t-Mmụta nke karịrị uru A o nwekwara gafere uru B.
Nsonaazụ pasent niile doro anya metụtara ọnụọgụ nke ule egosipụtara n'ọhịa n'aka nri Mpempe Rng na refefe ka otu uzo nke onu ogugu nwere ogologo ya na nke egosiri na ubi Mpụ.
Ma gịnị ka ihe a nile nwere ike imere anyị? O doro anya na ọ nwere ike ịkwado iji chọpụta nke bụ ihe omume enwere ike ịme ka ọ ghara ịlụ ọgụ, ma ọ bụ ndị kachasị na-egwu egwu maka ndị a.
Eleghi anya ihe omume nke agha agha: M na-arịọ ndị simulator ka ha wepụta oge 50.000 nke 100 na - agbanye ọ bụla iji hụ ugboro ole, ozugbo uru nke tS rutere na 3, mgbe ahụ ọ na - adaba (igwu egwu maka mgbake nke ohere hypofrequency).
Ọ bụrụ na m tinye akụkụ ndị a na simulator mgbe nkeji ole na ole echere m nwetara nsonaazụ a:
Ozugbo tS ruru 3, naanị oge 1 n'ime 5 (19,29% nke oge ahụ) ruru 3,50.
Nke a na-agwa m ma ọ bụrụ na panel Roomlọ Njikwa Etinyere m a Alert na ọnụ ahịa 3 na n'oge ndebanye aha nke a mere maka Tranche nke ọnụ ọgụgụ gburugburu 100 spins, M nwekwara ike na-eche nke na-agbalị iji merie ụfọdụ nkeji site na-egwu imechi ọdịiche nke mpe ohere.
O yikarịrị ka Ihe Omume Dabere na Ihe Nlereanya: M na-arịọ ndị simulator ka ha wepụta oge 50.000 nke 100 na - agbanye nke ọ bụla iji hụ ugboro ole, ozugbo uru nke tS ruru 2, mgbe ahụ ọ na - ebili (igwu egwu maka ịga n'ihu nke omume nke hyperfrequency ohere).
Ọ bụrụ na m tinye akụkụ ndị a na simulator (mgbe ọ bụla m na-eche nkeji ole na ole) ana m enweta nsonaazụ a:
Na 57,92% na-agwa m na mgbe tS kụrụ 2 ọ nwere ike ịga n'ihu na-ebili kama ịda.
M na-akwụsị ebe a, ndị a bụ naanị ihe atụ abụọ dị mfe banyere otu esi esetịpụ atụmatụ a ga-ekwe omume, nhọrọ na data ga-ekwe omume ịgafe ga-adị ọtụtụ, naanị ihe m kwadoro bụ iji ndidi chere maka nnwale ogologo oge na-enweghị ịpị ọzọ na mmemme ahụ .
N'ikpeazụ ihuenyo ikpeazụ! Ọ dabara nke ọma, e nwere nnọọ obere ihe na-ekwu ebe a, ọ bụ nanị okwu nke ịtọ ntọala 2 ụdị nke alerts nyere na panel Roomlọ Njikwa.
Nke mbụ na nke kachasị mfe bụ ịhọrọ ụda anyị chọrọ ịnụ mgbe mkpu nke uru tS bara ọrụ ma ọ bụrụ na anyị arụ ọrụ ahụ. Nhọrọ, ma ọ bụ mgbe ịkụ nzọ nke bot ahụ kwụsịrị.
Ọ bụrụ na ịhapụ ya na Ogbi doro anya na ọ nweghị ihe a ga-anụ ọbụlagodi na ịmeela ụda olu ahụ, yabụ gbanwee ya.
N'ịga n'ihu, anyị na-ahụ nhazi nhazi ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnata ozi ịntanetị oge ọ bụla mkpu nke uru t-Student bara uru (o doro anya na a ga-eji ya ma ọ bụrụ na anyị arụ ọrụ ahụ)Nhọrọ).
Dị ka oke ị ga-abanyerịrị na nke igbe akwụkwọ ozi gị, nke ga - abụ ma onye zitere ya na onye natara ozi ịdọ aka ná ntị ahụ, ma ọ bụ ịnwere ike iji igbe dị iche iche ị gbanyere na nnọchite gị dị ka onye na-ezipụ. A na-echekwa akụkụ nhazi niile nke igbe ndị a na mpaghara na PC gị na faịlụ ahụ na mgbatị .ini nke ịchọtara n'ime folda mmemme ahụ, enweghị data anakọtara ma ọ bụ na-ebunye ya na mpụga.
Nbudata Nbudata	LSentinel.zip - 4 MB